Rust, zavatra toa ifanarahan'ny mpandraharaha Linux | Avy amin'ny Linux
Ny fiteny fandaharana Rust dia nikendry hatrany ny hanolo ny C amin'ny fampandrosoana ny kernel Linux Ary rehefa nihamatotra ny Rust dia maro ny mpamorona naneho ny fahalianany amin'ny fampiasana azy amin'ny Linux kernel.
Ao amin'ny Virtual Conference an'ny Linux Plumber 2020, ny fikorianan'ny microconferencing avy amin'i LLVM nikarakara fivoriana iray momba ny fanontaniana misokatra sy sakana ho an'ny fanekena ambony ny Rust amin'ny kernel Linux.
Hita ny fahalianana amin'ity lohahevitra ity, satria ity fivoriana ity no be atao indrindra tamin'ny hetsika 2020.
Ka tokony hanoratra ny kernel Linux manontolo amin'ny fiteny Rust ve isika izao? Ity fifanakalozan-kevitra ity dia tsy manomboka anio ary nantitranterina hatramin'ny nisehoan'ny kinova voalohany an'ny Rust tamin'ny 2015.
Raha jerena ireo fahafaha-manolotra arosony Rust, misy milaza fa manao azy. Tamin'ity taona ity, tamin'ny fihaonambe Linux Plumber tamin'ny volana Aogositra, nanana fotoana indray ny mpandahateny nifanakalo hevitra momba izany.
Ary ny zavatra mahagaga dia izany toa miombon-kevitra izy ireo tsia tsy hanoratra indray ny kaody efa misy ao amin'ny Rust, fa ny fampandrosoana ny voan-kernel dia manohy mampiasa Rust. Izany hoe, mihevitra tontolo iray izay ahafahana manoratra kaody vaovao amin'ny Rust izy ireo.
Ity fivoriana ity dia natsangana tamin'ny sanganasa taloha nataon'ny mpamorona maro, anisan'izany ny lahateny iray nataon'i Alex Gaynor sy Geoffrey Thomas tamin'ny taon-dasa tamin'ny fihaonana an-tampon'ny Security Linux.
Nandritra ny fihaonambe dia nanolotra ny asan'izy ireo amin'ny modely kernel Rust prototyping izy ireo ary nanolo-kevitra ny handray ny Rust ao anaty kernel.
Notanisain'izy ireo ny asa mampiseho fa ny roa ampahatelon'ny fahasamihafana amin'ny kernel voatondro CVE amin'ny Android sy Ubuntu dia misy ifandraisany amin'ny olana momba ny fiarovana.
Farany dia nanazava izany izy ireo Ny harafesina dia afaka misoroka tanteraka an'io karazana hadisoana io noho ny API azo antoka kokoa afaka amin'ny alàlan'ny karazana rafitrao sy ny mpanamarina ny fampindramam-bola anao.
Ity fandinihana ity dia naharesy lahatra ireo mpihazona maro sahady Linus Torvalds, izay nanohana ny fampidirana ny harafesina ao anaty kernel. Thomas sy Gaynor, Josh Triplett, mpiara-miasa amin'ny ekipa miteny Rust ary mpamorona kernel Linux efa ela, ary koa ireo mpandraharaha liana hafa dia nandray anjara tamin'ny adihevitra momba io lohahevitra io.
Niresaka momba ny asany hatreto izy ireo ary ny sasany amin'ireo eritreriny sy fanontaniany voalohany alohan'ny hanokafana ny ankamaroan'ny fotoana hanaovana fifanakalozan-kevitra.
Ireo no fampiasana API misy ao amin'ny kernel, fanohanana ny maritrano, ary fanontaniana iray momba ny fifanarahan'ny ABI eo amin'i Rust sy i C.
Raha ny marina dia mino an'izany izy ireo tamin'ny voalohany Ny fampidirana ny harafesina amin'ny firafitry ny hazo dia tokony hanaja ireo C API misy.
Na izany aza, mahatsapa ny tsirairay fa ny devoly dia ao anaty antsipiriany, ary na ny asa vita hatrizay na ny resaka nandritra ny fotoana dia nanambara fanamby malalaka.
Ohatra, ny Linux dia mampiasa macros preprocessor be dia be sy ny laharana mihetsika izay tsy dia mifanentana amin'ny fitaovana bindgen sy ny interface ivelany an'ny Rust.
Araka ny filazan'izy ireo, amin'izao fotoana izao ny fampiharana matotra an'i Rust fotsiny dia ny compiler rustc, izay mamoaka kaody amin'ny alàlan'ny LLVM.
Ny kernel Linux dia manohana maritrano isan-karazany, izay maro amin'izy ireo dia tsy manana backend LLVM azo alaina.
Ho azy, Triplett dia nanolo-kevitra ny manampy Rust amin'ny kernel dia hanampy amin'ny fampitomboana ny fanohanana arsitektur ho an'ny Rust, mitanisa ny zavatra niainany tamin'ny tetikasa Debian. Notsipihany fa ny fampidirana rindrambaiko Rust amin'ny Debian dia nanampy tamin'ny fanentanana ireo mpankafy sy mpampiasa ny maritrano niche hanatsara ny fanohanan'ny Rust, ary manantena izy fa hanampy tohana kernel hanana vokatra mitovy amin'izany
Raha ny tena manokana dia resy lahatra izy fa ny maritrano misy backend LLVM dia hifanaraka amin'ny Rust. Ny fifanakalozan-kevitra koa dia niompana tamin'ny fampiharana Rust hafa ho lalana mankany amin'ny fanohanana lehibe kokoa ny maritrano.
Nifarana tamin'ny fotoana tsy voafaritra manokana ny fotoam-pivoriana, saingy toa misy ny hafanam-po amin'ny ankapobeny hanohanana ny Rust Mods ary hitombo ny fifanarahana momba ny fepetra takiana ankapobeny ho an'ity fanohanana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Rust, zavatra toa ifanarahan'ny mpandraharaha Linux
Toa ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao, miakatra ilay C tsy mihetsika.
Salama Rust, Bye Linus Torvalds!
Orinasa maherin'ny 60 no nanatevin-daharana ny hetsika fandraisana andraikitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny GLP